Mustafa Cagjar: “Ma jirto Duruuf igu qasbeysa in aan isaga tago Dowlad-Deegaanka”. | Dayniile.com
Home Warkii Mustafa Cagjar: “Ma jirto Duruuf igu qasbeysa in aan isaga tago Dowlad-Deegaanka”.
Mustafa Cagjar: “Ma jirto Duruuf igu qasbeysa in aan isaga tago Dowlad-Deegaanka”.
Mustafa Muxumed Cagjar Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaaliya ayaa si qoto dheer uga hadlay dagaalka ka socda Itoobiya, saameynta Deegaanka & qorshaha siyaasadeed ee uga degsan wax ka qabashada dagaalka TPLF ay isku ballaarisay.
Cagjar ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dagaallada ka socda Itoobiya oo dhaawac ku ah nidaamka Federaalka, nabadgalyada & siyaasadda Dowladda Federaalka itoobiya ay ku wajaheyso ismaamullada kala duwan.
“Dal haddii ciidamo ammaan kala madaxbannaan uu ka jiro khatar ayuu ka jiraa, dagaallada hadda ka socda Itoobiya ee siyaasadda, Deegaan & qowmiyad ahaan la isku leynayo waa mid halis ku ah Itoobiya” ayuu yiri Mustafa Cagjar.
Madaxweynaha Dowlad-Deegaanka Soomaalida Mustafa Muxumed Cagjar ayaa sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay iska difaacidda TPLF maadaama dagaalkooda aanay dan ugu jirin deegaanka sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu soo jeediyay in la kala saaro danaha gaarka ah iyo tan guud, Ciidamada Liyuu Booliis ee deegaanka ayuu ku sifeeyay in ay yihiin kuwo garanaya Dadka kunool Dowlad-Deegaanka Soomaalida halkii loo keeni lahaa Ciidamo kale oo federaalka ka socda.
“Cidda jecel in ay iga qaadato xukunka waxa aan leeyahay muddo iga sug waayo ma jirto duruuf hadda keeni karta in aan deegaanka isaga cararo, Cabsi kama qabo TPLF waxaana aaminsanahay in aan kahortagno oo aan iska difaacno” Mustafa Cagjar ayaa sidaasi yiri.
Dowlad-Deegaanka Soomaalida ayaa dhawaan sheegtay in ay diyaarisay Ciidan awood u leh in Magaalada Addis Ababa ka difaacaan Xoogagga TPLF oo damac uu ka galay in ay gudaha u galaan Caasimadda Itoobiya.
Previous articleTaliska Booliska Gobolka Bari oo ku dhawaaqay Go’aano Amni
Next articleXukuumadda Somalia oo ku dhawaaqday in la xoojinayo Amniga Muqdisho xilliga doorashada
Ahead of the much-awaited verdict by the International Court of Justice on the maritime case between Kenya and Somalia, a Somali cleric in Nairobi...
Boqolaal arday oo sanadkan ka qalin jebiyey Kuliyadaha Jaamacadda Benadir (Sawirro)